admin – Page 253 – Shabakadda Amiirnuur
West Point: “Al-Shabaab Waa Ay Ka Taxadaraan Iney Shacabka Wax Ku Noqdaan Weeraradooda” (Warbixin)
Xarun qaabilsan waxa loogu yeero “La dagaalanka Argigixisada” oo ka tirsan Kuliyadda ciidamada Mareykanka ayaa soo saartay daraasad cusub oo ku saabsan weerarada naf hurnimada ah ee ay fuliso Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Daraasaddan oo lagu soo bandhigay macluumaadyo iyo qiimeyn ayaa waxay si qoto dheer kaga hadashay hababka ay weeraradu […]
Taliye Ku Xigeenkii Nabad Sugidda oo Garoonka Muqdisho Lagu Qabtay Isagoo Lacag La Dhoofaya.
Taliye ku xigeenka ciidanka Nabad sugidda dowladda federalka ayaa wax yar ka hor lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo doonayay inuu la dhoofo lacag aad u badan oo dolar ah. Cbdulqadir Maxamad Nuur Jaamac ayaa sida ay ilo wareedyo xaqiijinayaan waxa uu watay boorso ay ku jirto lacag […]
Sawirro: Suuqa Bakaaraha oo Maanta Xiran Kadib Shaqo Joojin Ay Ku Dhawaaqeen Ganacsatada.
Suuqa ganacsiga Bakaaraha ayaa maanta xidhan kadib markii ay ganacsatadu ku dhawaaqeen shaqo joojin ay uga cabanayaan dowladda federalka ah. Dhammaan qeybaha uu suuqu ka kooban yahay ayaa maanta irdaha loo laabay, waxaana la arkayaa wadooyinkii ciriiriga ahaa ee suuqa oo haawanaya. Ganacsatada ayaa shaqo joojintan ku muujinaya sida ay […]
Diyaarad Ay Saarnaayeen 60 Qof oo Rakaab Ah oo Ku Burburtay Iiraan.
Wararka ka imanaya dalka Iiraan ayaa waxay sheegayaan in dayuurad siday rakaab gaaraya 60 qof ay ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla bartamaha wadankaasi. Dayuuraddan ayaa la xaqiijiyay in ay kusoo dhacday magaalada Semirom ee gobolka Isfahan, xilli ay isaga kala gooshaysay magaalooyinka Tehraan iyo Yausj. Shirkadda diyaaradda ayaa […]
Melleteriga Iyo Sirdoonka Oo La Wareegay Talada Wadanka Itoobiya [Warbixin].
Wasiirka difaaca Dowladda Itoobiya ayaa shir Jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ku sheegay in xaaladda degdegga ah ee wadanka Itoobiya lagusoo rogay Jimcihii lasoo dhaafay uu dhaqan galay islamarkaana uu socan doono 6 bilood oo xiriir ah. Siraj Fegessa oo ah wasiirka G/dhigga ayaa wariyaasha u sheegay […]
Todobaad ka badan waxaa xiran dekedda Muqdsiho oo waxba kama soo degaan sababo la xiriira Canshuuraha oo la kordhiyey taasoo u cuntami weydey Ganacsatada shixnadaha kala soo degta dekedda weyn ee Magaalada Muqdsiho, hadaba su’aashu waxey tahay xaggee wax iska qaban la’yihiin. Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Beyle oo amarka canshuur kordhinta soo […]
« Previous 1 … 251 252 253 254 255 … 281 Next »